के होला नेपालको आठौँ फाइनल प्रतिस्पर्धा? बन्ला इतिहास?
काठमाडौं- नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली एकपटक फेरि उपाधिको नजिक छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सम्मानजनक उपस्थिति भइरहँदा उपविजेतामा सीमित नेपाल कीर्गिस्तानमा भइरहेको नादेझ्दा कपमा उज्वेकिस्तानविरुद्ध फाइनल खेल्दैछ।
कीर्गिस्तानको काराकोलमा रहेको सेन्ट्रल स्टेडियममा फाइनल खेल नेपाली समयअनुसार बिहीबार दिउँसो पौने ४ बजे सुरु हुनेछ।
नौँ वर्षमा आठौँ फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा नेपाली महिला टोलीलाई पहिलो उपाधिको खोजि हुनेछ।
दक्षिण एसियाली प्रतिस्पर्धामा सधैँ भारतभन्दा पछाडि पर्ने नेपालका लागि सागको तयारीका लागि खेलिएको नादेझ्दा कप जितेमा उपाधि मात्रै होइन त्यसमा ठूलो आत्मविश्वासको जित हुनेछ।
१३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को तयारीका लागि कीर्गिस्तान गएको नेपाली टोलीले पाँच दिनमा नै चार खेल खेल्न लागेको हो। नेपाल, कीर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान सहभागी प्रतियोगितामा शीर्ष दुई टिम उज्वेकिस्तान र नेपाल फाइनलमा पुगेका हुन्।
लगातार खेल खेलिरहँदा नेपाली खेलाडीमा ‘स्टामिना’ को समस्या देखिएको छ। निरु थापा र रेखा पौडेल घाइते नै छन् भने अन्य खेलाडीले पनि शारीरिक आरामका लागि पूर्ण समय पाएका छैनन्। तीन दिनमा लगातार तीन खेल खेलेको नेपालले बुधबार एक दिन मात्रै बिश्राम गरेर बिहीबार फाइनल खेल्न लागेको हो।